Sida loo isticmaalo laba PC oo leh hal shaashad (HDMI switcher) 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Haddii aan wax badan la shaqeyno kombuyuutarrada, aan dayactir ku sameyno, ama aan maamulo dukaan kombuyuutar, ama aan ku qorno maqaallo mawduucyo ah oo ku saabsan mareegteena gaarka ah, waxaa dhici karta in aan haysanno laba kombiyuutar iyo hal kormeer oo aan ku isticmaalno labada. Xaaladdan, laguma talinayo in la isticmaalo hal fiilo HDMI ah oo laga wareejiyo hal kombiyuutar loona wareejiyo mid kale hadba sida loogu baahan yahay maaddaama dekedda HDMI aan had iyo jeer si fudud loo heli karin, iyo sidoo kale in laga dhigo wax aad looga xumaado in la isticmaalo labada kombiyuutar isku mar. Sida khubaro IT fiican leh, waxaan ku khamaari karnaa mid fiican Nuqul sameeyaha HDMI O HDMI biiro, karti u leh maareynta laba durdur oo maqal / muuqaal ah oo kala duwan una diri kara kormeeraha kaliya ee aan hayno, gacanta ayaan ku dooran karnaa kumbuyuutarka ahmiyada koowaad siinaya shaashadda iyadoo ku saleysan waxa ay tahay inaan sameyno waqtigaas saxda ah.
Tilmaamahan waxaan ku tusi doonaa sida loo diyaariyo laba kombuyuutar si ay u wadaagaan hal kormeere, Si taxaddar leh u doorta 3-da fiilooyinka HDMI ee la adeegsanayo iyo kuwa beddelaya ee loo adeegsanayo moodooyinka laga heli karo Amazon. Cutubka loo qoondeeyay waxaan sidoo kale arki doonaa sida loo isticmaalo furayaasha USB-ka, si aan awood ugu yeelano inaan u weecino aaladdayada wax soo gelinta (kumbuyuutarka iyo jiirka) hal kombiyuutar una wareejino mid kale qaab fudud.
AKHRISO: Maamul laba kormeere kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee fidsan
Sida loo isticmaalo laba kombiyuutar oo leh hal shaashad
Si loo abuuro bey'addan la wadaago, sida iska cad waxaan u baahannahay inaan leenahay hal kormeer, laba PC-ga oo go'an ama laba kombiyuutar nooc kasta ha ahaadeene (xitaa PC iyo laptop ama PC iyo Mac Mini), saddex fiilooyin oo HDMI ah oo dhererka ku habboon leh iyo beddelaad. HDMI awood u leh inay maamusho laba qaybood oo madaxbanaan HDMI durdurro iyo soo saar hal soo saar, oo gaari doona dekedda HDMI ee kormeeraha. Haddii aynaan weli soo iibsan kombuyuutar cusub, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad akhrido dhammaan talooyinka iyo tabaha ku jira tusahayaga Waxyaabaha ay tahay in la ogaado ka hor intaadan iibsan kombuyuutar cusub.
Xulo fiilooyinka ku habboon ee HDMI
Qaab dhismeedkan waxaan u baahan doonaa seddex fiilooyin HDMI ah: mid kombiyuutarka aan u aqoonsan doono inuu yahay "PC 1", mid kalena kumbuyuutarka aan ugu yeeri doonno "PC 2" iyo ugu dambeyntiina fiiladii ugu dambeysay ee HDMI, oo isku xiri doonta soosaarka HDMI ee beddelka la doortay ee muraayaddayada. .
Haddii aan rabno inaan dhigno badhanka dusha desktop-ka, labada fiilooyin ee loogu talagalay PC 1 iyo PC 2 waa inay muddo dheer ku filnaadaan (ugu yaraan 1,8 mitir), si loo daboolo masaafada udhaxeysa laba kumbuyuutar oo dhaqameed go'an. Hoos waxaa ku yaal liiska fiilooyinka HDMI ee ku habboon ujeedkan.
Rankie Xawaare Sare HDMI Cable, Nylon Braided, 1,8m (€ 6)
4K HDMI fiilada 2 mitir SUCCESO (€ 7)
Si aan ugu xirno batoonka kormeerka waxaan isticmaali karnaa fiilo yar (1 mitir ama ka yar), Si aad uhesho meesha ugu yar ee suurtogalka ah ee miiska, adoo dhigaaya furaha sidoo kale si toos ah hoosta kormeeraha (ama saldhigiisa) Hoos waxaan ka heli karnaa taxane ah fiilooyin HDMI gaagaaban.
Sida iska cad waxaan leenahay xoriyada guud ee qaabeynta: waxaan dooran karnaa seddex xarig oo dhaadheer, labo fiilooyin gaagaaban iyo mid dheer ama xitaa seddex xarig oo gaagaaban, taas oo kuxiran booska iyo cabirka kumbuyuutarada lagu xiriaayo. Waxa kaliya ee muhiimka ahi waa hel saddex fiilooyin HDMI oo tayo wanaagsan leh intaadan sii wadin tilmaamaha intiisa kale. Haddii aynaan garanayn gaabinta la socota fiilada HDMI, waxaan kugula talineynaa inaad akhrido falanqayntayada qotoda dheer Sida loo doorto fiilada HDMI ee saxda ah.
Xulo midigta beddelka HDMI
Markii aan aragnay fiilooyinka HDMI ee la adeegsanayo, waxaan u nimid qalab kuu oggolaanaya inaad ku beddelato isha fiidiyow ee u dhexeysa laba kombuyuutar adigoo riixaya badhanka: wareeji HDMI.
Qalabkan yar ayaa kuu oggolaanaya ku xirmaan laba fiilooyin HDMI sida aqbasho oo waxay bixisaa hal HDMI saarka saarka (saarka), kaas oo loo diri doono kormeeraha. Si aan uga wareejino hal kombiyuutar mid kale, waxa kaliya ee inala gudboon waa inaan riixno Badhanka badhanka joog xaga sare (badiyaa waxaa weheliya laba leydh oo dhalaalaya si dhakhso leh loogu aqoonsado isha firfircoon), si loogu kala badalo labada kumbuyuutar ee isku xidhan isla markaana lagu soo bandhigo kaliya fiidiyaha kombiyuutarka la doonayo ee kormeeraha Hoos waxaan ku soo aruurineynaa furayaasha HDMI ee ugu wanaagsan ee aad ka iibsan karto Amazon qiimo runti tartan ah.
Bedelka Techole HDMI Bidirezionale (€ 9)
GANA Wareejinta Aluminium ee HDMI (€ 11)
Techole HDMI biiro (€ 12)
Markii aan iibsano mid ka mid ah aaladahaas, aan hubinno inay u egyihiin Wareegyada labada dhinac ee HDMI ama in ay taageeraan "2 wax soo saar-1 soo saarHaddii kale waxaan halis ugu jirnaa inaan soo iibsanno qalab la mid ah laakiin si qoto dheer u kala duwan sida kanQalabka HDMI, taas oo u oggolaanaysa laba kormeerayaal inay ku xirmaan isla PC (xaalad aad u kala duwan oo aan ku saleysanahay hagaha oo dhan).
Hadda oo aan haysanno wax kasta oo aan u baahan nahay si aan ugu xirno labadeena kumbuyuutar hal kormeere waxaan ku sii wadi karnaa qaabeynta ugu dambeysa: ku xir fiilooyinka HDMI kala bixiyaha, kormeeraha iyo kumbuyuutarrada, shid shaashadda oo shid mid ka mid ah labada kumbiyuutar (ama labadaba): badhanka HDMI ayaa iskiis u daari doona iyadoo la isticmaalayo kan hada ka socda fiilooyinka HDMI iyadoo la riixayo badhanka waxaan dooran karnaa in ka daawo fiidiyaha kombuyuutarka PC 1 ama PC 2; si wax walbana ay isugu dhafan yihiin waxaan sidoo kale raaci karnaa tillaabooyinka hagitaankeena ah Mouse isla iyo kumbuyuutar isku mid ah si loo xakameeyo laba ama kabadan kombuyuutar, sidaa darteed waxaad wadaagi kartaa jiir iyo kumbuyuutar inta udhaxeysa labada kumbuyuutar (runti waxaan heysanaa labo shido, mid HDMI iyo hal USB). Beddelaha HDMI sidoo kale waa loo isticmaali karaa ku xidho laba konsol telefishanka Waxay leedahay hal deked oo HDMI ah, sidaa darteed waad ka faa'iideysan kartaa labadaba adigoon beddelin TV-ga (kharash aad uga qaalisan).
Haddii aan rabno inaan u adeegsanno laba kormeere oo isku dhinac ah kumbuyuutar isku mid ah, adoo adeegsanaya dekedda HDMI ee kaararka fiidiyowga loo qoondeeyey, waxaan kugula talineynaa inaad aqriso hagayaashayaga Sida loogu xiro laba kormeere kombuyuutarka mi Qaabeynta shaashadda laba-geesoodka ah ee Windows 10 si ay ula shaqeeyaan laba kormeere.
Haddii kormeeraha aan haysan uusan laheyn dekedda HDMI, waxaa la joogaa waqtigii loo beddeli lahaa mid cusub, oo laga kala dooranayo moodooyinka lagu arkay hagayaasheena. Kormeerayaasha PC-ga ee ugufiican inay iibsadaan inta udhaxeysa 100 iyo 200 Euros mi Iibso 21: 9 Wide Monitor (Ultra Wide Screen).
Sidee loo soo celiyaa isku xirnaanta shabakadda ee Mac